Bit By Bit - Abuuritaanka wada shaqeyn xooggan - 5.5.2 heterogeneity Kabaalaynta
Marka aad dad badan ku dhiirrigeliso in ay ka shaqeeyaan dhibaato dhab ah oo cilmi ahaaneed, waxaad ogaan doontaa in ka qaybgalayaashu ay noqon doonaan kuwo hijro leh laba siyaabood oo waaweyn: waxay ku kala duwanaan doonaan xirfadahooda iyo dadaalkooda. Ficil-celinta ugu horreysa ee cilmi-baarayaal badan oo bulsheed ayaa ah inay la dagaallamaan hijradaas iyada oo isku dayaysa in ay ka reebto ka-qaybgalayaasha tayadoodu hooseeyo kadibna isku dayaan inay ururiyaan qadar go'an oo macluumaad ah oo ka yimaada qof kasta oo ka haray. Tani waa hab khalad ah oo loogu talagalay mashruuca iskaashiga ballaaran. Halkii ay kula dagaalami lahaayeen heterogaannimada, waa inaad adigu isticmaashaa.
Marka hore, ma jirto sabab looga fogaado ka-qaybgalayaasha xirfad-yar leh. Wicitaanada furan, kaqeybgalayaasha khibrada hooseeya wax dhib ah ma keenaan; waxtarkooda waxba kuma yeeli karaan qofna uma baahna waqti ay ku qiimeeyaan. Xisaabinta bini'aadamka oo loo qaybiyey mashaariicda ururinta xogta, sidoo kale, qaabka ugu fiican ee tayada tayada ayaa ka timaada dib-u-dhiska, ee ma ahan muraayad sare oo ka-qaybgalka. Xaqiiqdii, halkii laga saari lahaa kaqaybgalayaasha xirfad hooseeya, hab wanaagsan ayaa ah inay ka caawiso inay sameystaan ​​tabarucaad ka wanaagsan, sida cilmi-baarayaasha eBird ay sameeyeen.
Marka labaad, ma jirto sabab loo soo ururiyo macluumaad qadarin ah oo ka yimid qof kasta. Ka qaybqaadashada mashruucyo badan oo wada shaqeyn ah ayaa ah mid aan caadi ahayn (Sauermann and Franzoni 2015) , iyadoo tiro yar oo dadka ah oo badanaa loo yaqaanno madaxa xaydhka - iyo dad badan oo wax ku biirinaya wax yar-mararka qaar loogu yeedho dabada dheer . Haddii aadan macluumaadka ka soo qaadin madaxa dufanka iyo dabada dheer, waxaad ka tagaysaa tiro badan oo xog ah oo aan la daboolin. Tusaale ahaan, haddii Wikipedia uu aqbalo 10 iyo 10 keli ah oo ah editor ah, wuxuu lumin doonaa 95% edegood (Salganik and Levy 2015) . Sidaa awgeed, mashaariicda iskaashiga ballaaran, waxaa ugu wanaagsan in la mideeyo hijroynta halkii ay isku dayi lahayd in ay tirtirto.